Viralheat: Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy ho an'ny SMB | Martech Zone
Alahady 1 Janoary 2012 Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Efa nitady serivisy fanaraha-maso media sosialy efa ela izahay. Ny rafitra fanaraha-maso ny media sosialy dia ahafahanao manangana marika sy teny lakile ary manara-maso ireo tranonkala media sosialy isan-karazany momba ny voalaza, ny fahatsapana ary ny hetsika manodidina ireo voalaza ireo. Ho an'ny orinasa, ny paikady fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy dia mety hitera-bola be amin'ny fitantanana ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fanaraha-maso ny fahatsapan'ny olona ny marikao, ary ny fandinihany ny fahombiazan'ny tetikady sosialy.
Ny olana dia ny vidin'ny rafitra tsy mampino! Mila fotoana ny famoahana fiverenana amin'ny paikadin'ny media sosialy, noho izany dia somary matotra be ny firesahana mpanjifa hanampiana sehatra iray izay an'arivony dolara isam-bolana. Nametraka ny fanontaniana tamin'ny mpivarotra media sosialy sasany aho hoe: “Misy sehatra fanaraha-maso media sosialy mora vidy ve any?” ary tsy nahazo valiny be loatra.
Na izany aza, valiny iray avy amin'ny Carri Bugbee Tena faly aho. Viralheat toa fanaraha-maso matanjaka amin'ny media sosialy sy Analytics sehatra naorina ho an'ny tsenan'ny orinasa kely sy salantsalany (SMB).
Faly aho manomboka mampiasa Viralheat hanomboka hanara-maso ny fisian'ny media sosialy ataon'ireo mpanjifantsika. Ny rafitra dia toa matanjaka be miaraka amin'ireo endri-javatra maro voatanisa:
Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy - endri-javatra lehibe io. Maro amin'ireo rafitra hafa no tsy fotoana tena izy, manangona tahirin-kevitra fotsiny avy amin'ny rafitra hafa.
Fanadihadiana momba ny influencer hamantarana ireo mpanaraka amin'ny fitaomana lehibe izay mety hisy fiatraikany amin'ny fampielezan-kevitra.
Famakafakana ny fahatsapana hamantarana ny toetran'ny tsirairay tononina.
Fanadihadiana momba ny viriosy hamantarana ireo bitsika sy firesahana izay mety misy viriosy.
Video fanaraha-maso tranokala video maherin'ny 200.
Fampidirana CRM ny manosika dia mitarika mankany amin'ny Salesforce na misintona amin'ny alàlan'ny Excel.
Toerana Geo fahaizana mametra ny mombamomba anao amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Fanairana mavitrika fahaiza-manao hahafahanao mahazo fampandrenesana eo noho eo momba ny voalaza.
API - mba hahafahanao mampifandray ny angona amin'ireo rafitra ivelany tadiavinao.
Ankoatra ireo fiasa, ny lafiny mahavariana indrindra an'ny Viralheat mety ny vidiny. Ny fonosam-panokafan'izy ireo dia $ 9.99 isam-bolana miaraka amina endri-javatra fototra. Ny fonosana $ 29.99 isam-bolana dia toa misy ny zava-drehetra ilain'ny orinasa kely hanombohana. Ny fonosana 89.99 isam-bolana dia misy fonosana maso misy marika!
Ho an'ny vidiny, ity dia mety iray amin'ireo fonosana fanaraha-maso media sosialy matanjaka indrindra hitako. Raha fantatrao ny sehatra fanaraha-maso media sosialy misimisy kokoa ho an'ny SMBs any (tsy famoahana media sosialy), ampahafantaro anay amin'ireo hevitra ireo. Ary - raha mpampiasa ianao Viralheat, Tianay ny mandre ny eritreritrao momba ny rafitra. Faly be izahay fa nanao sonia fonosana iray (ary ireo no rohy amin'ity lahatsoratra ity).
Tags: fanaraha-maso ny toerana geofanaraha-maso geosocialanalytics influencerfamakafakana ny fahatsapanafampidirana crm sosialyhaino aman-jery sosialyfanairana amin'ny media sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialylahatsary fanaraha-masofamakafakana viriosyviralheat
Dec 10, 2012 amin'ny 12: 55 AM
Doug, vaky aho rehefa nahita ny hafatrao satria hitako tamin'ny fikarohana fitaovana fanaraha-maso media sosialy ho an'ny SMBs. Avy eo hitako ny anarako tao amin'ny lahatsoranao. Misaotra tamin'ny fihorakorahana!
Mitady fitaovana fanaraha-maso vaovao foana aho izay mora vidy ho an'ny fanombohana sy ny SMB, saingy toa toa ny Viralheat no mety ho safidy tsara indrindra amin'ny vola. Raha sendra zavatra mitovy amin'izany aho dia hampahafantatra anao aho.
Dec 10, 2012 amin'ny 12: 58 AM
Azafady, @CarriBugbee: disqus! Mbola nahita raharaham-barotra tsara kokoa izahay (misaotra anao!) - ary manohy manatsara ny sehatra misy azy ireo i Viralheat.